Nkwenye ụkpụrụ omume - March ụwa
Mbido » Nkwenye nke gbasara iwu
The humanist na ọkà mmụta sayensị Salvatore Puledda mere 7 1989 January na Florence, isi obodo nke akụkọ ihe mere eme madu, a ụtụ Galileo Galilei, Giordano Bruno na ndị ọzọ na precursors nke sayensị taa. Na oge ahụ, e mere ndokwa n'etiti ndị bịara, ịlụ ọgụ nke ọma ka e wee nwee ọganihu nke sayensị na ọrụ nke mmadụ.
Site na ihe omume ahụ sitere na ụzọ ụwa na-enweghị agha iji mee ihe ga-akpalite ma kọwaa nkwa ahụ nye ndị nwere mmasị. Emepụtara "Ethical Commitment" na e mere emume na Mahadum nke Distance Education na Madrid nke ndị ọkachamara, ndị ọkachamara na ụmụ akwụkwọ mere ya n'asụsụ iri.
Anyị nọ n'ụwa nke ụfọdụ nwere ike ịzụ ihe ọmụma ha na ihe ọmụma maka nzube ọ bụla na ụgwọ ọ bụla. Ndị a ejiri ígwè ọrụ ọnwụ kpuchie ụwa anyị. Ndị ọzọ ejiriwo nkà ha mee ihe ọhụụ iji mee ihe iji mee ihe, na-emechi ọnụ, mebie akọ na uche nke ndị mmadụ na ndị mmadụ.
E nwekwara ndị ikom na ndị inyom bụ ndị ji Science na Ihe Ọmụma mee ka ike gwụ na agụụ, ihe ngbu na nhụjuanya nke Humanity, iji kpochapụ ọnyá ahụ n'ọnụ ndị a na-emegbu emegbu, inye ha olu ma nye ha obi ike.
Taa, na chi ọbụbọ nke atọ na narị afọ iri nke West, lanarị nke ụmụ mmadụ na umu na-egwu na n'elu Earth, anyị nkịtị n'ụlọ, na nro nke ebe obibi ọdachi na nuclear ọdachi looms.
Ya mere, anyị na-ajụ site na ebe a ndị ọkà mmụta sayensị, ndị nchọpụta, ndị ọkachamara na ndị nkụzi nke ụwa iji ihe ọmụma ha maka nanị uru nke Humanity.
M na-ekwe nkwa (ịṅụ iyi) nye ndị enyi m, ndị nkụzi, ndị ezinụlọ na ndị ọrụ ibe m anaghị eji ndụ m ihe ọmụma a nabatara na ọdịnihu ịmalite imegbu mmadụ, ma kama ịjụ maka ntọhapụ ha.
Ana m etinye onwe m n'ọrụ maka iwepụ ihe mgbu na nhụjuanya uche.
Enwere m ike ịkwalite nnwere onwe iche echiche na mmụta site na omume nke ndị na-adịghị eme ihe ike site n'ịchọ "ịgwọ ndị ọzọ dị ka m ga-achọ ka a gwọọ m."
Ezigbo ihe ọmụma na-eduba n'ikpe ziri ezi
Ezigbo ihe ọmụma na-egbochi esemokwu
Ezigbo ihe ọmụma na-eduga ná mkparịta ụka na imekọrita
Anyị na-akpọ site na ebe a na mahadum nile, ụlọ ọrụ nyocha, ụlọ akwụkwọ dị elu, kọleji ịmepụta ụkpụrụ omume a, dịka ihe Hippocrates mere maka ndị dọkịta, iji mezuo ihe ọmụma ahụ iji merie ihe mgbu na ahụhụ , iji mee ka ụwa dị jụụ.